Bible Mu Nsɛm Isak Nya Ɔyere Pa - Yehowa Adansefo Intanɛt Dwumadibea
KENKAN WƆ Acholi Afrikaans Albanian American Sign Language Arabic Armenian Armenian (West) Assamese Ateso Australian Sign Language Aymara Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Bambara Baoule Bicol Bislama British Sign Language Bulgarian Catalan Cebuano Chichewa Chin (Hakha) Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chitonga Chitonga (Malawi) Chitumbuka Chuvash Cinyanja Colombian Sign Language Costa Rican Sign Language Croatian Czech Czech Sign Language Dangme Danish Drehu Dutch Dutch Sign Language Ecuadorian Sign Language Efik English Estonian Estonian Sign Language Ewe Faroese Filipino Sign Language Finnish Finnish Sign Language French French Sign Language Ga Garifuna Georgian German Greek Greenlandic Guarani Gun Guna Haitian Creole Hausa Hebrew Herero Hiligaynon Hindi Hiri Motu Hmong (White) Hungarian Hungarian Sign Language Icelandic Igbo Iloko Indonesian Isoko Italian Japanese Japanese Sign Language Jula Kabardin-Cherkess Kabiye Kabyle Kachin Kannada Kazakh Kekchi Kikamba Kikaonde Kikongo Kikuyu Kiluba Kimbundu Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Kisi Kongo Korean Krio Kwangali Kwanyama Lamba Laotian Latvian Lhukonzo Lingala Lithuanian Low German Luganda Lugbara Luo Luvale Macedonian Macua Malagasy Malay Malayalam Maltese Mam Mambwe-Lungu Mapudungun Marathi Mauritian Creole Maya Mazatec (Huautla) Mende Mexican Sign Language Miskito Mixe Mixtec (Guerrero) Mizo Mongolian Moore Myanmar Nahuatl (Guerrero) Nahuatl (Northern Puebla) Ndebele Ndonga Nepali Ngabere Nicaraguan Sign Language Niuean Norwegian Nuer Nyaneka Nzema Oromo Ossetian Otomi (Mezquital Valley) Papiamento (Curaçao) Paraguayan Sign Language Persian Polish Portuguese Quechua (Ancash) Quechua (Ayacucho) Quechua (Bolivia) Quechua (Cuzco) Quiche Romanian Runyankore Russian Rutoro Samoan Sango Sena Sepedi Serbian Sesotho (Lesotho) Seychelles Creole Shona Sidama Sinhala Slovak Slovenian Solomon Islands Pidgin Spanish Spanish Sign Language Sranantongo Swahili Swati Swedish Tagalog Tajiki Tamil Tankarana Tarascan Tatar Telugu Tetun Dili Thai Tiv Tlapanec Tojolabal Tok Pisin Tongan Totonac Tshwa Tsonga Tswana Turkish Turkmen (Cyrillic) Twi Tzeltal Tzotzil Uighur (Arabic) Ukrainian Umbundu Venda Venezuelan Sign Language Vezo Vietnamese Wallisian Waray-Waray Wayuunaiki Wolaita Wolof Xhosa Yoruba Zapotec (Isthmus) Zapotec (Lachiguiri) Zulu
WUNIM ɔbea a ɔwɔ mfonini yi mu no? Wɔfrɛ no Rebeka. Na ɔbarima a ɔrekohyia no no yɛ Isak. Ɔrebɛyɛ ne yere. Ɛyɛɛ dɛn na ɛbae saa?
Isak papa Abraham pɛe sɛ onya ɔyere pa ma ne ba no. Na ɔmpɛ sɛ Isak ware Kanaanfo mmea no bi, efisɛ na saa nkurɔfo no som abosom. Enti Abraham frɛɛ n’akoa na ɔka kyerɛɛ no sɛ: ‘Mepɛ sɛ wosan kɔ baabi a m’abusuafo te wɔ Haran kɔware yere ma me ba Isak.’
Ntɛm ara Abraham akoa no faa yoma du twaa kwan tenten no. Bere a ɔbɛn baabi a Abraham abusuafo te no, ogyinaa abura bi so. Na ɛrekɔ anwummere, bere a kurom hɔ mmea bɛba abɛsaw nsu. Afei Abraham akoa no bɔɔ Yehowa mpae sɛ: ‘Ma ɔbea a ɔbɛma me nsu no bi anom na wama yoma no bi no nyɛ nea wobɛpaw no sɛ ɔyere ama Isak.’
Ankyɛ na Rebeka bae sɛ ɔbɛsaw nsu. Bere a akoa no srɛɛ no sɛ ɔmma no nsu nnom no, ɔmaa no bi. Na ɔsan kɔsaw bi brɛɛ yoma a na nsukɔm de wɔn no nyinaa. Na ɛyɛ den efisɛ yoma nom nsu pii.
Bere a Rebeka wiei no, Abraham akoa no bisaa no ne papa din. Ɔsan bisae sɛ ebia obenya baabi ada wɔ wɔn fie. Ɔkae sɛ: ‘Me papa ne Betuel, na wubenya baabi ada wɔ yɛn fie.’ Ná Abraham akoa no nim sɛ Betuel yɛ Abraham nua Nahor ba. Enti ɔkotow daa Yehowa ase sɛ wakyerɛ no kwan akɔ Abraham abusuafo nkyɛn.
Saa anadwo no Abraham akoa no bɔɔ n’amanneɛ kyerɛɛ Betuel ne Rebeka nuabarima Laban. Wɔn nyinaa gye toom sɛ Rebeka betumi ne no akɔ akɔware Isak. Bere a wobisaa Rebeka no dɛn na ɔkae? Ɔkae sɛ ‘Yiw,’ ɔpenee so sɛ ɔbɛkɔ. Enti n’adekyee no wɔtratraa yoma no so fii ase twaa kwan tenten no san kɔɔ Kanaan.
Wokoduu anwummere. Rebeka hui sɛ ɔbarima bi nennam wuram hɔ. Na ɛyɛ Isak. N’ani gyei sɛ ohuu Rebeka. Ná mfe abiɛsa ni a ne maame Sara wui, na na ɔda so di awerɛhow. Nanso afei Isak ani begyee Rebeka ho pii, na ne werɛ kyekyee bio.
Ɔbarima ne ɔbea bɛn na wɔwɔ mfonini no mu no?
Dɛn na Abraham yɛe de nyaa ɔyere maa ne ba, na adɛn nti na ɔyɛɛ saa?
Ɔkwan bɛn so na Onyankopɔn tiee Abraham akoa no mpaebɔ?
Bere a wobisaa Rebeka sɛ ɔbɛware Isak anaa no, dɛn na ɔkae?
Dɛn na ɛmaa Isak ani gyee bio?
Kenkan Genesis 24:1-67.
Suban pa bɛn na Rebeka daa no adi bere a ohyiaa Abraham akoa no wɔ abura no ho no? (Gen. 24:17-20; Mmeb. 31:17, 31)
Adepa bɛn na Kristofo betumi asua afi nhyehyɛe a Abraham yɛ maa Isak no mu nnɛ? (Gen. 24:37, 38; 1 Kor. 7:39; 2 Kor. 6:14)
Adɛn nti na ɛsɛ sɛ yɛpɛ bere de dwennwen nsɛm ho sɛnea Isak yɛe no? (Gen. 24:63; Dw. 77:12; Filip. 4:8)
MOMFA NKYERƐKYERƐ MO MMA
Ná Rebeka Pɛ sɛ Ɔma Yehowa Ani Gye
Dɛn na yebetumi ayɛ de asuasua Rebeka? Kenkan ne ho asɛm, na sua ne ho ade pii.